Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Dhulgariir ka dhacay California Nevada: 5.9
Jebinta Wararka Safarka • News • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Dhulgariir xoog badan ayaa xirey waqooyiga Japan
Dhulgariir xoog leh 5.9 oo ku yimid miisaanka ayaa laga duubay 3.52pm ee Nevada, oo u dhow Khadka Kalifoorniya ee California onSmith Valley.
Dhulgariir 5.9 ayaa lagu cabiray Smith Valley, Nevada, khadka California, Nevada State 3: 49 pm Pacific TIme Khamiistii.
Dhul gariirka ayaa laga dareemay magaalooyinka Reno, Carson City iyo Stockton.
Khasaare weyn ama dhaawacyo lama filayo sababo la xiriira dhulka fog ee dhul gariirku ka dhacay.
Dooxada Smith waa meel loo qoondeeyey tirakoobka degmada Lyon, Nevada, Mareykanka. Dadku waxay ahaayeen 1,603 tirakoobkii 2010.
Gobolka Mono waa degmo ku taal bariga-bartamaha gobolka US ee California. Laga soo bilaabo tirakoobkii 2010, dadku waxay ahaayeen 14,202. taasoo ka dhigaysa gobolka shanaad ee ugu dadka yar California. Kursiga degmada waa Bridgeport
July 8, 2021 dhulgariir wuxuu ka dhacay xadka labada degmo. Qoto dheer ee la cabiray waxay ahayd 61 mayl.